खबर / प्रभाव / एक्सप्लेनर
‘चीन, रुस’ हरूले बनाएका कोरोना खोप परीक्षण नेपालमा किन? नवलपरासीस्थित होङसी सिमेन्टका हजार चिनियाँ कामदारमा परीक्षण गर्ने चीनको प्रस्ताव
गजेन्द्र बाेहरा काठमाडौं - बिहीबार, भदौ ११, २०७७
एक समय थियो। स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले कुनै खोप पत्ता लगाउँथे, कुनै औषधी पत्ता लगाउँथे। अनि, त्यसको प्रयोग सुरुमा मुसा वा बिरालोमा गरिन्थ्यो। वा, कुकुरमा गरिन्थ्यो। बाँदर वा त्यस्तै कुनै जनावरमा त्यसको परीक्षण हुन्थ्यो।
तर, अहिले समय निकै घर्किसकेको छ। एउटा भाइरसले सारा विश्वलाई यति चाँडै आक्रान्त बनायो कि, सायदै त्यो मान्छेको कल्पना थियो।
सारा संसारलाई इन्तु न चिन्तु बनाइरहेको ‘कोरोना भाइरस’ को नयाँ संस्करण।
सन् २०१९ को अन्त्यसँगै चीनको वुहानबाट मानव शरीरमा प्रवेश गरेको यो भाइरस अहिले संसारका करोडौं मानिसभित्र चलमलाइरहेको छ।
न यसको एकीन स्वरुप थाहा छ न यसको गुण र विशेषताबारे ठ्याक्कै कसैले भन्न सकेको छ।
सारा विश्व नै आक्रान्त हुन थालेपछि विश्वका वैज्ञानिक यो भाइसरविरुद्धको खोप बनाउने दौडमा लागे।
करिब ६ महिनापछि बल्ल यो भाइरसविरुद्धका खोपबारे चर्चा चल्न थाल्यो।
निकै ढिला भइसकेको थियो।
मुसा वा बाँदरमा परीक्षण गर्ने समय नै छैन। यो कुर्दाकुर्दै मानव अस्तित्व नै खतरामा पर्नसक्ने स्थिति पनि आउनसक्छ। त्यसैले यो सिधै मान्छेमा परीक्षण भयो।
कोरोना खोप अहिलेसम्म जबरजस्ती कुनै मान्छेमा परीक्षण भएको छैन। कुनै नयाँ औषधीको अन्वेषण भइसकेपछि त्यसलाई परीक्षण गर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड नै हुन्छ।
त्यसैअनुरूप अहिले विभिन्न देशले उत्पादन गरेको खोप बिरामीमा परीक्षण भइरहेको छ।
र, ती बिरामीलाई औषधी परीक्षणका लागि ‘स्वंयसेवक’ भनिएको छ।
अहिलेसम्म कोरोनाको न यकिन औषधी छ, न यकिन उपचार विधि।
अनि बाँच्ने आसामा विश्वका लाखौं मानिस ‘स्वंयसेवक’ बन्न आतुर छन्।
ज्यानको माया कसलाई हुन्न र?
र, विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन भएका खोप नेपालमा पनि परीक्षणको तयारी भइरहेको छ।
सरकारले नदिएका बेला इबोला भाइरसविरुद्ध तयार गरिएको ‘रेमडेसिभिर’ लाखौ मूल्य खर्चेर बिरामी आफैंले मगाए र, त्यसबाट निको पनि भए।
धन्य, सरकारले अहिले रेमडेसिभिर नेपाल भित्र्याइसकेको छ।
अब सरकारले आधिकारिकरूपमै परीक्षणका लागि ल्याउने ‘खोप’, अनि नेपालमा पनि स्वंयसेवकको कमी? कल्पनै छैन।
कोरोनाविरुद्धका खोप अन्वेषण र उत्पादन
विश्वका विभिन्न देशले बनाएका सातवटा खोप अहिले परीक्षणका चरणमा छन्।
भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले पनि कोरोनाविरुद्धका तीनवटा खोप परीक्षण गरिरहेको दाबी गरेका थिए।
ती खोप केही महिनाभित्रै सबै कोरोनाका बिरामीका लागि उपलब्ध हुने उनले बताएका थिए।
अहिले एकदमै चर्चामा आएका र लगभग ‘तयार भइसकेका’ भनिएका मुख्य खोप भनेको चीन, रुस र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका हुन्।
चीनको वुहान इन्स्टिच्युट आफ बायोलोजिक प्रोडक्ट्सअन्र्तगतको सिनाफर्मा, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र रुसको गेमेलिया नेसनल सेन्टर अफ इपिडिमियोलोजी एन्ड माइक्रो बायोलोजी।
यी तिनै खोप अहिले तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन्।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नी छोरीमा खोप परीक्षण गरेर सारा विश्वलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे। रुसले आगामी अक्टोबर महिनामा बजारमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।
‘स्पुत्निक–५’ नामक यो भ्याक्सिन अब नेपालमा पनि परीक्षणका लागि आउने छ।
यद्यपि, रुसले अर्काे पनि भ्याक्सिनको तयारी गरिसकेको छ।
रुसका उपप्रधानमन्त्री तात्याना गोलिकोवाका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा साइबेरियास्थित भेक्टर भाइरोलोजी इन्स्टिच्युटले अर्काे खोपको क्लिनिकल परीक्षण पूरा गरिसक्ने छ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रुसको यो दोस्रो भ्याक्सिनको असर अहिलेसम्मका परीक्षणमा सकारात्मक नै देखिएको छ।
यद्यपि, चीनले भने रुसले जत्तिकै भ्याक्सिनको बारेमा हल्लिखल्ली त गरेको छैन। तर, भित्रभित्रै उसले कोरोना भ्याक्सिनको सफल परीक्षण गरिसकेको छ।
युएई, पेरु, अर्जेन्टिनाजस्ता देशमा हजारौं मानिसमा यसको सफल परीक्षण भइसकेको बिबिसीले जनाएको छ।
चीनले कोरोनाविरुद्धको यो खोपलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण रणनीतिबारे चीनले अंग्रेजी भाषामा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘चीनमा यो भ्याक्सिन एकपटक सफलरूपमा स्थापित भइसकेपछि यो विश्वव्यापी सार्वजनिक उत्पादनका लागि हुनेछ।’
अर्थात् चीनले यो भ्याक्सिनको ‘सुत्र’ विश्वका अरू देशलाई पनि दिनेछ।
अफ्रिकी र दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने चीन एकमात्रै छिमेकी देश हुनेछ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले पनि एउटा भ्याक्सिन बनाइसकेको छ। यो भ्याक्सिनलाई ChAdOx1 nCoV-19 vaccine नाम दिइएको छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेनर इन्स्टिच्युट र अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपले उत्पादन गरेको यो खोप अहिले तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ।
बेलायतमा १० हजार ५ सय ६० जना बयस्क र बालबालिकामा यो खोपको तेस्रो चरण परीक्षण भइरहेको छ।
यही भ्याक्सिन अमेरिकाले पनि ३० हजार बिरामीमा परीक्षण गर्न खोजिरहेको छ।
ब्राजिलमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि ५ हजार ‘स्वंयसेवक’ यो खोप लगाउन तयार छन्।
र, दक्षिण अफ्रिकाले पनि करिब २ हजार मानिसमा यो भ्याक्सिन परीक्षण गरिरहेको छ।
कम्तिमा ६ महिनाभित्रै यो खोप बजारमा आइसक्ने छ। तर, यो अवधि भने परीक्षण गरिएकाहरूमा देखिने ‘प्रभाव’ मा निर्भर हुनेछ।
अस्ट्रेलियाले यो भ्याक्सिनको परीक्षण सफल भएसँगै २ करोड ५० लाख डोज अग्रिम ‘बुक’ गरिसकेको छ।
बेलायतले ३ करोड डोज भ्याक्सिन ‘स्टक’ गर्ने योजना बनाइसकेको छ। त्यस्तै युरोपेली देशका लागि ४० करोड ‘डोज’ माग आइसकेको छ।
अमेरिकाले कम्पनीसँग ३० करोड ‘डोज’ सम्झौता गरिसकेको छ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशका लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले १ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने सम्झौता कम्पनीसँग गरिसकेको छ।
नेपालमा खोप परीक्षण : किन, कसरी?
मुख्यतः नेपालमा अहिले तीन देशले उत्पादन गरेका खोप परीक्षणको तयारी भइरहेको छ।
चीन, रुस र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
र, यसको नेतृत्व अहिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरिरहेको छ।
चीनले सुरुमा नेपालमा काम गरिरहेका आफ्नै मजदुरहरूमा यो खोपको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नवलपरासीमा रहेको ‘होङ्सी शिवम्’ सिमेन्ट प्रालिमा कार्यरत चिनियाँ मजदुरहरूमै यो खोप परीक्षणको प्रस्ताव चीनले राखेको हो।
सुरुमा शिवम् सिमेन्टमा चीनको होङ्सी कम्पनीले लगानी गरेपछि यो ‘होङ्सी शिवम्’ सिमेन्ट भएको हो। यहाँ १ हजारभन्दा बढी चिनियाँ मजदुर काम गर्छन्।
त्यसका लागि ‘स्वंयसेवक’ मजदुरहरू तयार भइरहेका छन्।
रुसले नेपालमा कम्तिमा १ हजार जनामा यो परीक्षण गर्न चाहिरहेको छ।
परिषदका अनुसार खोप परीक्षणका लागि रुसका राजदूतलगायत प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको छ।
त्यस्तै, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा उसको खोप नेपालमा परीक्षणको प्रस्ताव गरेको छ।
सम्भवतः सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्डको सहकार्यमा बनाउँदै गरेको खोप नेपालमा पनि परीक्षण हुनेछ।
परिषदका अनुसार नेपालमा यी खोप परीक्षण कहिलेदेखि हुने भन्ने कुरा अझै यकिन भइसकेको छैन।
‘यो एकदमै सुरुवाती चरणको छलफल हो। सबै कुरा टुंगिसकेको छैन,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रमुख अनुसन्धाता डा. मेघनाथ धिमालले आयोमेलसँग भने, ‘नेपाल पनि परीक्षणका लागि इच्छुक छ भनेर देखाउनका लागि यो छलफलको सुरुवात भएको हो।’
उनका अनुसार विश्वमा परीक्षणकै चरणमा रहेका सातमध्ये तीन खोप नेपालमा परीक्षण गर्न अहिले ‘कुरो’ मात्रै चलेको हो।
‘धेरै प्राविधिक काम कुरा टुंग्याउन बाँकी नै छ,’ उनले भने।
नेपाललाई परीक्षणको फाइदा के?
नेपालमा खोप परीक्षणका कुरा चलिरहँदा त्यसका बारेमा अनेकन तर्कवितर्क आइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा ‘धनी’ देशहरूले नेपाललाई ‘प्रयोगशाला’ बनाउन थालेको जस्ता टिप्पणी पनि आइरहेका छन्।
तर, खोप उत्पादनको दौडमा नभए पनि कम्तिमा परीक्षणका लागि सहभागी हुँदा सफलतापछि नेपालले पनि खोप पाउन सहज हुनेछ।
परीक्षणकै क्रममा रहेका यी खोपका करोडौं मात्रा विश्वका धनी देशले ‘अग्रिम बुकिङ’ गरिरहेको अवस्थामा गरिब देशहरूले खोप नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिसकेको छ।
खोपबारे उठिरहेका विरोधका स्वरहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मत्थर पार्ने प्रयास भने गरिरहेको छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भनेका थिए– ‘यो परीक्षण विश्वव्यापीरूपमा स्थापित स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार हुनेछ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको गाइडलाइनअनुसार यो परीक्षण हुनेछ।
‘यो परीक्षणका लागि कोही कसैलाई जोरजबरजस्ती गरिने छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘स्वतःस्फूर्तरूपमा यसको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणमा सहभागी हुनेलाई मात्रै सामेल गरिने छ। त्यसैले यसबारे भ्रम नपाल्न र भ्रम नर्छन अनुरोध छ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ११, २०७७